maqaal:: Maxaa kala haysta madaxwayne daahir rayaale iyo mucaaradka s/land?
Maxaa kala haysta mucaaradka s/land iyo madaxwayne riyaale?
Iyadoo maalmahanba ay xiisad xaga siyaasad ah oo u dhaxaysa SomaliLand iyo mucaaradka dalkaasi, xiisadaas oo u dhaxaysay muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo loogu daray sanad, sanadkaas oo ay maanta bilaw tahay 15/May/08, ayna kaga ekaan doonta 15/May/09, halka mucaradku ka diidan yihiin arrintaas.
Kulankan oo ay ka qaybgaleen Madaxweyne Rayaale,Axmed siilaanyo,Fayasal cali waraabe,Xoghayaha Udub,Muuse Biixi,C/raxmaan C/qaadir,Cawil cali ducaale,waxaa kale oo goobjoog ka ahaa Saladiin,Akadimiga Nabada iyo Komishanka Qaranka.
Dawladan iyadu ka jirta Somaliland oo imika shaqaynaysay 5 sano aya waxaa la sheegaya in ay kaga egtahay maanta oo ah 15/May/08, balse guurtida oo aan qaabilsaneen arrimaha muddo kordhinta ay ugu dareen sanad kale, labada dhinac ayaa xalay wada hadal dhex maray iyagoo maanta galinka danbena isa soo hor faadhiisan doona. Mar la waraysanayay madaxweyne ku xigeenka Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, wuxuu BBCda u sheegay in uu wadahadalkasi uu ahaa mid usii gogol xaadhaya wada hadalka galabta dhici doona, balse kani uu ku dhamaaday si guul ah. Intaas wuxuu sii raaciyay "Waxaan Dadweynaha Somaliland ugu bushaaraynayaa inaanay wax dhibaato ahi dhacayn, hawshayadiina si wanaagsan ayay ku dhamaatay,wixii hadhayna Berito ayaanu dhamaystiraynaa oo soo gabagabaynaynaa ee Cadawga Somaliland waxaan u sheegaynaa inaanu xalinayn arimahayagii oo aanay waxba dhacayn" . .
Kulankan oo aanay ka soo bixin wax qodobo ah oo ay labada dhinac ku heshiiyeen, hadana waxa la sheegay inuu hor dhac u yahay heshiis lafilayo inay labada dhinac ku soo afjaraan khilaafaadkii ka taagnaa mudadii halka sanadood ahayd xilka loogu kordhiyey Rayaale. Si kastaba ha ahaatee walwal weyn oo soo food saaray shacbiga Somaliland ayaa jirtay kadib markii ay hore u sheegeen labada Xisbi Mucaarid Kulmiye iyo Ucid wixii ka danbeeya marka ay gaadho 15/May oo ay xilka mudad madaxweynuhu kaga eegtahay aanay Madaxweynaha u aqoonsandoonin Madaxweyne Sharci ah.
Sidoo kale sida ay tibaxayaan warar xog ogaali in beri ay kulan qado ah yeelandoonaan Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin iyo Gudoomiyayasha labada Xisbi Mucaarid KULMIYE iyo UCID Axmed Siilaanyo Faysal Cali Waraabe, kaas oo qodobo lagu heshiiyo la isla gaadhidoono labada dhinac.
C/karim Ahmed Hussein.
Xuquuqda boggani waa ay xafidan tahay © http://wardoon.tripod.com Contact webmaster wali335@gmail.com